Maungtintyin: December 2011
အစာအိမ်နာကျင်မှုဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ဆရာဝန်ထံ သွားခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်က သူ့မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ ဒုက္ခ၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ ပြဿနာရှိသလား-ဆိုတာ မေးမြန်းပါတယ်။ လူနာက သူဟာ သူ့ရဲ့သူဌေး- သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ဆိုးဝါးတဲ့အချို့အရာနဲ့ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မှု ရှိခဲ့တယ်လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
ဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့အရာကို ပြောင်းလဲဖို့ လူနာမှာ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုခု ရှိပါသလား? မရှိပါ-လို့ လူနာက ပြန်ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက ကျွန်ုပ်ကို အနှောင့်အယှက် ဆက်တိုက်ပေးနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ “အတိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ သင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ တစ်စုံတစ်ခု မရှိ။ အဲဒီအခန်းကဏ္ဍကို ပိတ်ပစ်ပါ။ ရှေ့ဆက်သွားပါ။ သင်ဟာ သင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အချို့အရာအပေါ်မှာ သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ သင့်ရဲ့အစာအိမ်ကို ဒုက္ခပေး ၀င်နှောက်နေတယ်” လို့ ဆရာဝန်က ပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဆေးအချို့ကို ညွန်ကြားပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဗိုက်နာ ဗိုက်အောင့်နဲ့ပတ်သက်လို ကုသရာမှာ သွက်လက်မြန်ဆန်စေဖို့ အတိတ်ကို မေ့ဖျောက်ပစ်ရန် သူ့ကို အကြံပြုပါတယ်။
နောက်လူနာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တဲ့ ဦးယဉ်နာရှိတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက ရှင်းပြပါတယ်။ သူမရဲ့ အနာဂါတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမိမှာကို ကြောက်လန့်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက သူမရဲ့ ခေါင်းကိုက်ရော ဂါကို ဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာ ခံစားသတိပြုမိတဲ့အတွက် ဆရာဝန်က လူနာကို ပြောပါတယ်။
“သင်ဟာ အမှန်တရားအားလုံးကို မွေးထုတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ပြုလုပ်လျင် အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ဖို့ မရှိပါ။ သင်ဟာ မှားယွင်းမှုကို မွေးထုတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ပြုလုပ်လျင် သင်ဟာ အခြေအနေ အကြောင်းတရားများကို ပြုပြင်ဖို့ ရွေးပိုင်ခွင့် ရှိဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဟာ နဂိုအတိုင်းတော့ ပြန်ဖြစ်မလာပါ။ သင့်ရဲ့ရွေးစရာများကို စာရင်းတစ်ခု ပြုလုပ် ပါ။ ရွေးစရာအသီးသီးအတွက် တုန့်ပြန်လာတဲ့ဇယားများကို ပြုလုပ်ပါ။ ပြီးတော့ ဆောင်ရွက် ပြုလုပ်ပါ။ အခြေအနေကို ဆန်းစစ် ပြုလုပ် ပါ။ အဲဒီနောက် အဲဒါက ရောက်ရှိလာတဲ့အတိုင်း ခြေလှမ်းအသီးသီးကို ယူပါ”။
လူတွေဟာ သူတို့ ပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တော့တဲ့ အတိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်ကြသလို ဖြစ်မလာသေးတဲ့အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကြောက်လန့်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် မျော်လင့်ထားတဲ့ ပြဿနာကို ကျော်လွန်သွားတဲ့ များစွာသော စိုးရိမ်မှုတွေဟာ ဘယ်တော့မှ ပေါ်ပေါက်မလာပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖိအားများနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ နာမကျန်းမှုများဟာ အကျွန်ုပ်တို့က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ - နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ- ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာအရ အကျွန်ုပ်တို့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပြဿနာများကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ပြဿနာ များ အမြဲရှိတော့မယ် ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Murphy- ရဲ့ ဥပဒေသကတော့ ဒီလို ပြောပါတယ်။ ဘာမဆို မှားယွင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုလျင် အဲဒါက ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ဆိုတာပါ။ ဘ၀မှာ ပြဿနာကို မတွေ့ကြုံဘူတဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက် ရှိပုံမပေါ်ပါ။ အချိန်တိုင်းမှာ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပြဿနာတစ်ခု ကို ဖြေရှင်းကြ ရပါတယ်။ အသစ်အသစ်တွေကလည်း မှိုလိုပေါက်လို့ လာနေပါတယ်။ ကာလတစ်ခု လွန်လာပြီးတဲ့နောက် ပြဿနာတွေက အကျွန်ုပ်တို့ လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အချိန် ဘ၀မှာ အဲဒီအချိန်တစ်ခုတော့ ရှိသလားဆိုတာ စူးစမ်းသိချင်လာစ ပြုပါတယ်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ မပြောတာကတော့ “ဘ၀တစ်ခုဟာ လွယ်ကူလာတော့မယ်- ပြီးတော့ အရာရာတိုင်း ပြည့်စုံလာတော့မယ်” ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းက အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ ဆိုတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဲဒါတွေကို စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရင်ဆိုင်မလား? အဲဒါတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားမလား? ဒါမှမဟုတ် အဲဒါတွေနဲ့ပတ် သက်လို့ ပူပန်သောက ရောက်သလား? စိုးရိမ်နေသလား? အကျွန်ုပ်တို့ဟာ စိုးရိမ်မှုများ- ပူပန်သောကများ ဖြင့် အကျွ်န်ုပ်တို့ရဲ့ပြဿနာ များကို ပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းက ဒါတွေက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အကျွန်ုပ်တို့ကို နာမကျန်းအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဖိအားများကို တိုးဖြည့် ထပ်ပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဘ၀ရဲ့ဖိအားများဟာ အလွန်ကြီးကျယ်ပါတယ်။ အကြောင်းက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အဲဒါတွေက အကျွန်ုပ်တို့ကို အကျိုးသက်ရောက်စေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ စိုးရိမ်သောကတွေ ကြောက်လန့်မှုတွေ ဖိအားတွေ လွန်ကဲမှုတွေ ခံနေရတဲ့ အဲဒီသူတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်တွေ- စိတ်ပညာဆရာတွေ- ကုထုံးအထူးကုဆရာဝန်တွေရဲ့ ရုံးဌာနများမှာ ဘ၀ရဲ့ ရုန်းကန်မှုများဖြင့် ကိုင်တွယ်မဖြေရှင်းနိုင်တော့တဲ့ လူအများ နေ့စဉ် ပုံမှန် ပြည့်နေပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်ဟာ အပြုသဘောဆောင် ပျော်ရွှင်နေမယ်ဆိုလျင် အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်က ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေတာ စိုးရိမ်သော ကဖြစ်နေတာထက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခံစားနိုင်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေဟာ ဖိအားများနဲ့စပ်ဆက်နေတဲ့ ဖျားနာမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာသုတေသနပြုချက်များအရတော့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒေါသထွက်နေတဲ့အခါ- ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာအရ ကမောက်ကမ ဖြစ်နေ တဲ့အခါ- အကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆက်စပ်နေတဲ့ဓာတုဗေဒများဟာ “တိုက်ခိုက်မှု ဒါမှမဟုတ် ရှောင်ပြေးမှု” အတွက် အကျွန်ုပ်တို့ကို အသင့်ပြင်ထားစေတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြကြပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ကို နာမကျန်းအောင် ပြုလုပ်တဲ့ ဖိအားများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ- ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ- ရုပ်ပိုင်းဆိုင် ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို တားမြစ်ဖို့ အချို့သော လက်ခံနိုင်စွမ်းနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကမ္မဌာန်းတရားမှာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ- နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးတရားအတွက် အကျိုးအမြတ်များစွာ ရှိပါတယ်။ ဒါက အန္တရာယ်ကင်း လုံခြုံပါတယ်။ ထိရောက်မှု ရှိပါတယ်။ အကုန်အကျမရှိပါ။ ဘယ်လိုကမ္မဌာန်းထိုင်ရမယ်ဆိုတာကို လေ့လာသင်ကြား တာနှင့်တပြိုင်နက် - နေရာတိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ အကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ - အဆင်သင့် ကုစားချက်တစ်ခုကို- အကျွန်ုပ်တို့အတွင်းသို့ သယ်ဆောင်လာပါတော့တယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Sunday, December 25, 2011